Maalin: Janaayo 25, 2020
Waxaa loo qorsheeyay in ay si wada jir ah u sameeyaan Dawlada Hoose ee Ordu iyo Dawladda Hoose ee Kabadüz waxaana la shaaciyey in la qaban doono January 26, 2020. Ambaşı dabaaldega barafka ”15 magnitude dhulgariir ka dhacay bartamaha degmada Sivrice ee ELazığ [More ...]
Gudoomiyaha BTSO İbrahim Burkay, oo saxeexay maalgashiyo muhiim ah duulista sida Aquila iyo Bursa Space iyo Aviation, Gökçen Holding Gudoomiyaha Celal Gökçen, iyo Gökmen Uzay Havacılık [More ...]
Maamulka Karabük wuxuu shaaca ka qaaday in la joojiyay barnaamijka Karabük Karfest, oo loo qorsheeyay in la qabto maalinta Axada, Janaayo 26. Bayaanka ayaa lagu sheegay; “Karabük, oo loo qorsheeyay in lagu qabto 26.01.2020 (Axadda) oo ku taal Keltepe Ski Center, oo ah xarunta Dalxiiska Jiilaalka, [More ...]
Maareeyaha Guud ee Maamulka Garoomada Diyaaradaha ee Gobolka (DHMİ) iyo Gudoomiyaha Gudiga Hüseyin Keskin ayaa baaray howlgalada sadexaad ee wadooyinka mara garoonka diyaaradaha ee Istanbul. Maareeyaha Guud ee Garoomada Diyaaradaha ee Gobolka (DHMİ) Maareeyaha Guud Hüseyin [More ...]
faahfaahinta Turkey ee mashruuca cusub ee ay sameeyeen ku automakers gudaha Baabuurta Initiative Group (TOGG) sii si ay u tagaan Forty. Fiidiyoow cusub oo ku saabsan sida muuqaalka TOGG ee ugu xiisaha badan ee xisaabta warbaahinta bulshada ay u shaqeyso [More ...]
Agaasinka Guud ee Gaadiidka TCDD wuxuu yiri, “Isbedelka lagu sameeyay dhimis-qorista ma ahan mid lagu soo kordhiyay koontada warbaahinta bulshada. Agaasinka Guud ee TCDD, qiimaha macaamiisha, xisaabta rasmiga ah ee twitter-ka, “Qiimaha dhimista [More ...]
Sababtoo ah furitaanka Göztepe Gürsel Aksel Stadium ee Güzelyalı, wadooyinka qaar ayaa gobolka lagu xiri doonaa maalinta Axadda, Janaayo 26. Wadooyinka basaska dawlada hoose ee isticmaala wadooyinkan sidoo kale waa la beddeli doonaa. Sababtoo ah furitaanka Göztepe Gürsel Aksel Stadium ee Güzelyalı [More ...]
19/1 Street, oo isku xira Mithatpaşa Street illaa Mustafa Kemal Sahil Boulevard oo ku dhex jira baaxadda howlaha cusboonaysiinta ee 'SZSU, Poligon iyo Arap durdurrada, waxaa lagu xiri doonaa isu socodka gaadiidka laba bilood laga bilaabo Isniinta, 27 Janaayo. Izmir [More ...]
Waaxda Gaadiidka ee Dawladda Hoose ee Manisa ma diiday diidmada muwaadiniinta waxayna bilaabeen adeegyo basaska inta u dhaxaysa xarunta degmada Kırkağaç iyo xarunta tareenka. Kırkağaçlılar, oo ku faraxsan abaabulka adeegga basaska cusub, ee Degmadda Manisa Metropolitan [More ...]